Malunga nathi-Ulwazi lwePrinta Co, Ltd.
Umsunguli wenkampani yethu nguWang Shumin.
Umzi-mveliso wethu wasungulwa ngonyaka ka-2000, kodwa asinalo igama lenkampani ngelo xesha, ukuze nje sihlangane neemfuno zorhwebo lwalapha ekhaya. Ngapha koko, imakethi yethu yayisekhaya. Senze kuphela iimveliso ze-OEM kwaye asangena kwimarike yamanye amazwe.
Ngo-2012, iiodolo zethu zaya zisiba ninzi ngakumbi, ke ngoko kufuneka sithenge izixhobo ezingakumbi kwaye siqhubekele kwindibano enkulu yokusebenzela. Ke ngoko, sayibhalisa inkampani yethu ---Qingdao Ukuthengisa ukuRhweba ngeNtengiso Co, Ltd. Ngo-2017, ngokuphuhliswa kweshishini lokupakisha, kufuneka sibhalise iimpawu zophawu ngakumbi, senze uphando kwaye siphuhlise itekhnoloji ethe kratya, ke ngoko simiseleI-Qingdao yoLwazi lokuPrinta Co, Ltd. ijolise ngokukodwa kwiphakheji yamaphepha kunye neemveliso zokuprinta.
Iimveliso zethu eziphambili ziibhokisi, iingxowa zephepha, iincwadi, amakhadi okubulisa, njl. Umzi mveliso wethu useJimo, Qingdao kwaye banamava acebileyo okuvelisa ngaphezulu kwe-16years. Sinobambiswano lwexesha elide kunye nezindlu ezaziwayo zokupapasha izindlu kunye namashishini okusanhlamvu kunye neoyile.
Sinoomatshini bethu bokushicilela, itekhnoloji, abahloli bomgangatho nabasebenzi. Ukusukela kunyaka ka-2018, siqala ishishini phesheya, kuba siqokelele amava atyebileyo kwinkqubo yokuhanjiswa, umgangatho kunye nolawulo lwexesha lokuhambisa kunye neendlela zokuhambisa, ngaphezulu kwako konke, sinokunikela ngexabiso eliluncedo kakhulu kolu shishino.
Injongo yethu ekuphuhliseni imarike yasekhaya kukuncedisa intanga yethu kunye neemveliso ezilungileyo.
Injongo yethu yokuphuhlisa imarike yaphesheya kukuthetha ngeemveliso ezenziwe e China.
Amanqaku ethu aphambili aquka
I-United States yaseMelika, iCanada, iMexico, iOstreliya, iYurophu, uMzantsi mpuma weAsia, iRussia, iTshayina, iJapan, Korea, kwi-Middle East, e-Afrika, eMzantsi Melika, njl.
Abantu abahlukeneyo bathanda uyilo obahlukileyo
Uyilo olulungileyo lubaluleke kakhulu kwiibhokisi ezenziwe umlo weencwadi. Sineqela lethu loyilo kwinkampani. Ukuba ufuna uyilo olutsha, singanceda. Oko kuthetha ukuba, sinokunikezela ngeenkonzo zokumisa indawo enye ukusuka kuyilo ukuya kwimveliso yokuhambisa, ngoko ke lolona khetho lwakho lubalaseleyo.